Vatsigiri veMDC-T Vosungwa muHarare Mushure Mekupondwa kweMupurisa
Chivabvu 31, 2011
Mumusha weGlen View-3 nedzimwe nzvimbo dzinogara vazhinji muHarare dzinonzi dzaberekera ingwe sezvo mapurisa amuka chibhebhenenga achisunga vose vatsigiri veMDC vavanenge vaona vachivapomera mhosva yekuponda mumwe mupurisa nemusi wesvondo.
Mapurisa, ayo ari kuti akagumburwa zvikuru nekufa kwaInspector Petros Mutedza, anoti anenge abatwa nemhosva yekuponda mupurisa uyu anofanira kutongerwa rufu. Mapurisa ari kupomera vatsigiri veMDC mhosva yekuponda VaMutedza.
Chikwata chemapurisa nevesangano revasori chinonzi chaumbwa kuti chiferefete nyaya iyi. MDC inoti nhengo dzayo dzinodarika makumi matatu dzasungwa nemapurisa kusvika pari zvino kunyange mapurisa ari kuimba rwiyo rwekuti hapana asungwa.
MDC inoti magweta ayo ari kurambidzwa kuona vasungwa ava. Mapurisa anoti Inspector Mutedza vakarohwa vachitemwa nematombo uye kukaviwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veMDC mushure mekunge vaenda kunoparadza musangano unonzi waiva pabhawa repaMunyarari muGlen View Three.
Mapurisa anoti vatsigiri veMDC vanoenda panzvimbo iyi vachiita misangano zvisiri pamutemo. Asi MDC inoti yange isina musangano panzvimbo iyi.
Mapurisa anoti nesvondo masikati VaMutedza nevamwe vavo vanomwe vakaenda kunzvimbo iyi nechinangwa chekumisa musangano weMDC zvakazopa kuti paite mhirizhonga.
VaMutedza vakafa asi mumwe mupurisa anonzi akakuvara zvishoma uye akatobuditswa muchipatara.
Vagari vemuGlen View vaudza Studio7 kuti paMunyarari Shopping Centre, inzvimbo ine mukurumbira zvikuru sezvo paine misika, mabhawa uye panoperera makombi ekunzvimbo iyi. Inspector Mutedza vange vachishanda kuBorowdale, asi vachigara paMalebereign Police Station.
Mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vanoti mapurisa ari kungoramba achisunga nhengo dzebato ravo.
Asi mutauriri wemapurisa, Va Andrew Phiri, varamba kuti pane munhu ati asungwa pari zvino.